Usuku My Pet » 5 Izinyathelo Izithiyo Ukunqoba Relationship Communication
Igcine ukubuyekezwa: Septhemba. 26 2020 | 2 imiz ufunde
Couples yayivele uhlangane zokuxhumana hiccups endleleni, noma ngabe esanda ukujola noma sigubha emashumini ndawonye. Lezi missteps kunzima ukuwuqondisa futhi zidinga imizamo bayazi kusuka bobabili ophathina. Ukukhumbula ngala macebiso alandelayo ezizoba usizo esifundweni labo ukungavumelani ekugcineni:
1. Gwema ukungakhulumisani: Abesifazane kanye namadoda bobabili enecala naleli qhinga, futhi ngendlela emangalisayo esiyingozi futhi elimazayo. Ivala shaqa ngokuyinhloko kokuvala umlingani wakho ngaphandle, futhi lokho akusizi ekhuluma nezindaba zangempela ususondele. Ngisho noma kunzima kungase kubonakale, sebenzisa amagama akho ukuveza imizwa yakho, futhi ungesabi ukuthola othize. Khumbula, umuntu ilungelo uya ukusebenza nawe ubuhlobo izinkinga, hhayi ukusebenzisa imizwa yakho njengoba nezinhlamvu ngokumelene nawe.
2. Musa ukucabanga: Wayefana ukungakhulumisani, kucabangela inshokutsi, kucombela kukhona esinye isibonelo kokusuka umbono wakho out, futhi neze kungalungile noma umuntu. Ungase ucabange ukuthi izimpendulo yakhe eyathatha isikhathi esifushane kusho yena engasenandaba, kodwa ukuze abe nje okuningi kwenzekani emsebenzini. Uma ungenalo ubuze futhi bathembele esikhundleni ku emcabangweni wakho, ungenawo athole iqiniso, futhi cishe ukuzibizela tendzaba ezinkudlwana ekugcineni.
3. Ukuziphatha okuhle Compliment: Uma uzizwa njengo umlingani wakho hhayi kona uthando okuningi njengakuqala, zama ngokuletha it up ngendlela yokuthopha ngokusebenzisa isiphakamiso. "Ngiyayithanda ngempela basanga wakho,"Futhi, "I miss ekuseni yakho imiyalezo,"Kukhona kokubili izibonelo ze-non-esongela ekhuthaza izenzo ufisa. Ngale ndlela, uthola iphuzu lakho yonkana nanoma ulimi ingane.
4. Ngumnikazi imizwa yakho: Abesilisa nabesifazane kokubili ezingokomzwelo, kodwa bavame ukukhombisa labo imizwelo ngezindlela ezahlukene ngokuphelele. Owesifazane zingase zizibuze, futhi umuntu angase fume. Omabili ahlala avela Izimpendulo ziyokwehluka ngokomzwelo, futhi kokubili basonta umuntu azizwa kubo. Kunokuba bathi umlingani wakho, "Wenza uzizwa stupid,"Okuyinto isitatimende ingane, ukuchaza imizwa yakho ngezwi possessive, futhi inikeze incazelo.
Ngokwesibonelo, "Ngazizwa ngiyisilima uma wenza ihlaya eyisimungulu blonde" ingaphansi kuka ukuqophisana, "Njalo kungenza ngizizwe seziphukuphuku." Isitatimende sokuqala futhi kukunika umlingani wakho ithuba lokuchaza yena futhi wenza kuye ukwazi imbangela yangempela yokungabi udaba.
5. Hlala positive: Lena toughie, Ngiyazi! Kulula kanjalo ukuze bayathukuthela noma ukusho izinto Angiqondile. Yenza konke ongakwenza ukuze uhlale omuhle futhi sisebenze nalo ekuxazululweni kodaba okunempilo. Sure, izinto zihamba ukushaya up ngezinye izikhathi. Leyo ingxenye evamile abantu ababili abahlala ndawonye ukuphila kwabo ndawonye. khumbula nje ukuhlala ukhumbula izizathu uku ndawonye endaweni yokuqala, futhi ubeke focus on begcizelela ukuthi isibopho.